Faarax Macalin “Codkii waa la boobay, waana lagu takri falay, Dacwad ayaa tageynaa oo Maxkamad ah” – idalenews.com
Faarax Macalin “Codkii waa la boobay, waana lagu takri falay, Dacwad ayaa tageynaa oo Maxkamad ah”
Faarax Macalin oo ahaa Gudoomiye kuxigeenkii Baarlamaanka kana tirsan Xisbiga ODM ee musharaxa Ra’iisul Wasaaraha Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inay qaadacayaan natiijada doorashjada madaxtinimada dalkaas oo goor dhow la shaacin doono.
Faarax Macalin ayaa sheegay inay ka cabanayaan cododka oo uu tilmaamay in boob lagu sameeyay, isagoo ku eedeeyay Gudiga doorashada inuu ku takri falay.
“Waxaa ka cabanaya codkii la boobay, ma aragtay si xun ayaa loogu takri falay, Gudiga doorashada xisaabihii iyaga hayeen, iyaga nagu wareejiyeen, iyo waxay isku dar dareen ayay ku kala duwan yihiin inta aan la gaarin, anaga dadka dhulka noo jooga inta aysan wax noo soo bandhigin”ayuu yiri Faarax Macalin.
Sidoo kale Faarax Macalin ayaa sheegay inay dacwad ka gudbin doonaan arrintan, isagoo xusay inay tagayaan Maxkamad, si ay go’aan cad uga helaan doorashada oo u muuqata inuu ku guuleystay Raila Odinga.
Dhinaca kale waxaa xilligan la sugayaa natiijada doorashada, iyadoo xarunta Bomas ayaa ka socota xaflad loogu dhawaaqayo natiijada doorashada, waxaana munaasabada ugu horeyn lagu furay astaanta qaranka.
Natiijooyinka horu dhaca ayaa muujinaya in Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Kenya Uhuru Kenyatta uu u muuqdo inuu ku guuleystay doorashada madaxtinimada, isagoo helay 50.03 % halka Ra’isul Wasaare Raila Odinga uu kaalinta labaad soo galay. waxa uu ka sareeyaa 4,109 cod tiradii loo baahnaa inuu ku guuleysto doorashada.
Mr Kenyatta waxa uu helay 6,173,433 dhamaan codadkii la dhiibtay oo gaarayay 12,338,667, isagoo ka horeeya Raila Odinga, oo isna helay 5,340,546 – oo u dhiganta codadkii ay dadku dhiibteen.
Si kastaba ha ahaatee waxaa aad loo dhowrayaa natiijada doorashada ee ay gudiga doorashada shaacin doonaan daqiiqadaha soo socda.
Weerar is qarxin oo ka dhacay magaalada Kapul, xilli uu booqanayay Xoghayaha gaashaandhiga Mareykanka
Uhuru Kenyatta Waa Madaxweynaha cusub ee dalka Kenya